Gorsa Fayyaa - UNHCR Egypt
Ani/ilmi/abba manaa/haati manaa koo asoosama Coronavirus jedhamuun qabame jedhee yoo shakke maal gochuu qaba?
Ministeerri Fayyaa fi Uummataa Masrii Asoosama Vaayirasii Koronaa ilaalchisee gaaffilee fi gaaffii gargaarsa yaalaa guutummaa Masriitti gaafataniif sarara bilbilaa (dial 105) qopheessee jira.
Maatii biraa koronaavaayirasiin qabamaniiru jedhee shakku waliin mana jireenyaa keessa jiraadha garuu ofirraa adda baasuu/gargaarsa argachuu diduu hin danda'an. Maal gochuu danda'a?
Gorsa barbaaduuf fi/ykn dhimma isaanii isaaniif gabaasuuf sarara gargaarsaa Ministeera Fayyaa (105) bilbiluu qabda.
Gama biraatiin ammoo hanga danda’ametti manni guutuun qilleensa akka qabaatu gorfamtu.
Haguuggii fuulaa manatti yoo argame namni COVID-19 qaba jedhamee shakkame hanga gargaarsi MoHPn dheeratutti haguuggii fuulaa akka uffatu gaafadhu
Yeroo haguuggii fuulaa baaftan, namni dhukkubsate sun harka dhukkubsataa ofii isaa akka hin faalneef haguuggii fuula isaa duubaa irraa akka baafatuu fi qaruuraa balfa jabaa haguuggii qabu keessa kaa’uun qulqullinaan akka gatamu gaafadhaa.
Yoo haguuggii fuulaa hin argamne dhukkubsataan yeroo qufa’uu ykn haxxifachuu barbaadu hundatti waraqaa tishuu fayyadamuun fuula isaa haguuggachuu danda’a. Dhukkubsataan tishuu hidhii fi afaan isaa fuuldura kaa’uu qaba.
Waraqaa tishuu akkuma haguuggii keessa jiranitti, qamadii balfa jabaa haguuggii qabu keessa kaa’uudhaan ofirraa baasuu.
Nama dhukkubsate kunuunsitu yoo ta’e/yeroo jiru haguuggii fuulaa yoo jiraate uffachuudhaan of eeguu qabda.
Maaskicha balfa jabaa haguuggii qabu keessa kaa’uudhaan nagaan gatuu kee mirkaneessi.
Maaskiin yoo hin argamne nama dhukkubsate irraa fageenya meetira 1 ol ta’e eeguun yoo haxxiffate ykn qufa’e cophni sun hidhii, afaanii fi ija keessan akka hin geenye mirkaneessaa.
Harka keessan yeroo hunda bishaanii fi saamunaadhaan dhiqachuu mirkaneessaa. Yoo saanitaayizaroota alkoolii irratti hundaa’an qabaattan, kanneenis fayyadamuun ni danda’ama.
Lafa, bakka jajjaboo nyaachuuf itti fayyadamtanii fi bakka biroo harka keessaniin yeroo baay’ee tuqxan kamiyyuu bishaan, saamunaa ykn qoricha farra vaayirasiitiin yeroo yeroon disinfeekshinii gochuu mirkaneessuu.
Yoo qorannoon COVID-19n qabame ta’e tarkaanfiiwwan/of-eeggannoo addaa fudhachuu qabu maal fa’i?
Lammiileen, koolugaltoonni, baqattoonnii fi godaantonni hundi wal fakkaataan tarkaanfiiwwan fayyaa Hawaasaa kan deebii weerara COVID-19 sadarkaa biyyaatti barbaadu ni argatu. Kana jechuun namni COVID-19n qabamuu isaa mirkanaa’ee fi haala seeraa isaa osoo hin ilaalin tarkaanfiiwwan fudhataman mallattoo kilinikaa yoo mul’ate hospitaala keessatti kunuunsa Ministeera Fayyaa ni argatu jechuudha.
Tarkaanfiiwwan akkanaa kun hanga kunuunsi dheeraa fi qorannoon mana yaalaa namni sun dhukkuba kana irra aanuu fi bakka tursiisaa keessaa bahuu akka danda’u mirkaneessutti adda baafamuu barbaachisuu danda’a.
Tarkaanfiiwwan Ministeera Fayyaa akkasumas yeroo inkuubeshinii vaayirasii COVID-19 guyyoota 2- 14 gidduutti garaagarummaa qabu keessatti tuttuqaawwan nama COVID-19n qabamuun isaa mirkanaa’e hundi akka madaalamu, qoratamee akka ilaalaman ni taasisa. Yoo dhukkuba COVID-19 irraa bilisa ta’e jireenya idilee isaanii kan eegalan yoo ta’u yoo qorannoon irratti argame tarkaanfiiwwan kunuunsaa fi tursiisaa walfakkaatan hanga qorannoon bilisa ta’utti kan fudhatamu yoo ta’u namni sun dhibee kana irra aanuu isaa fi jireenya idileetti deebi’uu akka danda’us kan agarsiisu ta’a.
Yoo rakkoon addaa ykn jijjiiramni isin mudate, maaloo UNHCRtti gabaasaa Infoline yookaan kan wal’aansaa miiltoo.
Kaardii UNHCR koo waanan dhabeef/yeroon isaa waan darbeef dhaabbata fayyaa hawaasaatiin tajaajila naaf dideera. Maal gochuu danda'a?
Dhaabbileen fayyaa hawaasaa kanneen akka Ministeera Fayyaa Dhaabbileen eegumsa fayyaa sadarkaa duraa tajaajila eegumsa fayyaa sadarkaa duraa kennuudhaaf kaardii UNHCR hin ilaalan tajaajila kutaa balaa tasaa Ministeera Fayyaa irrattis kanuma.
Yoo balaan hatattamaa hospitaala ciisuu barbaadu si mudatee fi kaardii UNHCR yeroon isaa darbe qabaatte/kaardii kee dhabde, michuu rifaralaa UNHCR Save the Children karaa neetworkii hospitaalota waliigaltee qabuun kunuunsa hospitaala ciisuu akka argattu si deeggara.
Caritas ykn dhaabbati kamiyyuu eegumsa akka qabaannu nu gargaaran saanitaayizarii ykn meeshaalee qulqullinaa ni kennaa?
Michoonni yeroo ammaa saanitaayizarii raabsaa hin jiran. Michoonni tajaajila kana kennuu yoo jalqaban, isin beeksifna.
Gidduu kana saamunaa fi qoricha farra vaayirasii lafaa mana keessanitti akka argamu gorfama.
Namoonni vaayirasichaan akka hin qabamne mirkaneessa barbaaduu yoo barbaadan qorannoof eessa deemuu danda'u? Akkasumas gatii akkamiitiin?
Ministeerri Fayyaa fi Uummataa koolugaltootaa fi baqattoota dabalatee namni Masrii keessa jiraatu kamiyyuu waa’ee COVID-19 gorsa akka barbaaduuf sarara bilbilaa (105) kenneera. Namni yaaddoo qabu kamiyyuu vaayirasichaan qabamuu isaa yoo shakke ykn mallattoo dhukkuba infuleenzaa COVID-19 waliin walqabatee jiraachuu danda’a jedhanii shakkan yoo qabaate.
Ministeerri Fayyaa fi Uummataa COVID-19 waliin walqabatees hospitaalota 28 madaallii fi kunuunsa akka kennan muudeera. Madaallii fi kunuunsi COVID-19 bilisa.
Namni tokko haala fayyaa hamaadhaan yoo rakkate tajaajila fayyaa argachuu danda'uuf kaardii isaa haaromsuu qabaa?
Michoota eegumsa fayyaa hojiirra oolchan UNHCR (Caritas, Refuge Egypt, PSTIC fi Save the Children) tajaajiloota armaan gadii itti fufsiisuu fi sababa kaardii yeroon isaa darbe hin haaromfamne dhiyeessuutiin akka hin dhaabne qajeelfamni kennameera, kaardii koolu galtummaa yookiin baqattootaa.:
Kunuunsa fayyaa sadarkaa tokkoffaa
Wal’aansa dhukkuboota yeroo dheeraa
Kunuunsa fayyaa sammuu sadarkaa tokkoffaa
Ulfa walxaxaa ta’eef kunuunsa fayyaa walhormaataa
Haala yeroo muddamaa fi tajaajila kunuunsa rifaralaa biroo haalawwan yeroo dheeraa murteessoo ta’aniif.
Tajaajiloonni kunniin waraqaan beellamaa ykn ragaaleen kun yeroon isaanii darbee osoo hin ilaalin yeroo kunuunsa fayyaa hatattamaa fi kunuunsa sammuu hatattamaa ilaalchisee abbootii waraqaa muudamaa fi waraqaa ragaa koolu galtummaa qabaniif ni kennama. Akkasumas, ragaaleen kun yeroon isaanii darbee jiraachuu fi dhiisuu isaanii osoo hin ilaalin wal’aansa dhukkuboota yeroo dheeraadhaaf namoota waraqaa ragaa koolu galtummaa qabaniif ni kennama.
Qormaata beekamaa baqattoonni hospitaalota mootummaa keessatti mudatan ilaalcha keessa galchuun UNHCR maaliif dhaabbilee tajaajila dhuunfaa kennan qorannoo/wal’aansa koronaatiif kontiraata hin godhu?
COVID-19 deebii mootummaan hoogganamu laaboraatooriiwwan Ministeera Fayyaa fi Uummataa amanan qorannoo mirkaneessa dhukkubaa fi tarkaanfiiwwan fayyaa hawaasaa, tarkaanfiiwwan kunuunsa ykn tursiisaa lammiilee, baqattoota, koolu galtoota, godaantotaa fi nama biyya Masrii keessa jiraatu kamiifuu qixaan dhiyaatudha UNHCR karoora deebii mootummaa kabajuu fi walqixa akka argatan gochuudha.
Kana malees, dhaabbileen dhuunfaa tarkaanfiiwwan fayyaa hawaasaa sadarkaa barbaachisan fi deebii kunuunsa weerara kanaaf kennamu hin qaban. Kanaafuu, UNHCR deebii biyyoolessaa weerara kana bulchuuf kennamu kan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa fi Ministeera Fayyaa fi Uummataatiin durfamu fi qajeelfame qofa kan eegu ta’a.
Hawaasni walgahii hawaasaa fi walga'ii kana fakkaatu gaggeessuuf osoo hin hayyamamiin akkamitti waa'ee COVID-19 hubannoo uumuu danda'a?
Aangawoonni Masrii balaa daddarbiinsa COVID-19 namoonni walitti dhiyeenyaan jiraachuu isaaniitiin hammaatu to’achuuf manneen barnootaa, yunivarsiitiiwwan, wiirtuuwwan dargaggootaa dhaabuu fi walga’ii gurguddaa dhorkuu dabalatee tarkaanfiiwwan of eeggannoo fudhataniiru. Kanaafuu, walga’iin hawaasaa fi walga’iin tarkaanfiiwwan fayyaa hawaasaa Masrii fudhatte hordofuudhaan hordofamuu qabu.
UNHCR fi michoonni isaa hojiiwwan hir’isuu isaanii dura wiirtuuwwan simannaa isaa keessatti, fuula Feesbuukii UNHCR irratti akkasumas michoonni tokko tokko barruulee hubannoo uumuu afaanota adda addaatiin hiikaniiru.
UNHCR fi michoonni isaa balaa daddarbiinsa COVID-19 to’achuuf walga’ii fi walga’ii dhaabuu waliin walqabatee tarkaanfiiwwan of eeggannoo Ministeera Fayyaa fi Uummataa kabajuun qabeenya hubannoo dabalataa dabarsuu itti fufu.
Qabeenya hunda afaanota adda addaatiin gabatee Trello irratti asii argachuu dandeessu: https://trello.com/c/KBXVuDwj